एमसीसी नितान्त आर्थिक विकासको कार्यक्रम हो, कुनै रणनीतिसँग सरोकार राख्दैन: अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री हेनिक – " सुलभ खबर "
एमसीसी नितान्त आर्थिक विकासको कार्यक्रम हो, कुनै रणनीतिसँग सरोकार राख्दैन: अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री हेनिक
नेपाल सरकारले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन संसदबाट अनुमोदन गर्नुअघि नेपालमा सघन बहस चर्किएको छ ।नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको सम्झौताअनुसार नेपालमा सडक स्तरोन्नति तथा ऊर्जा व्यापारलाई सहज बनाउने आर्थिक कार्यक्रमलाई पछिल्लो दिन सैन्य रणनीतिको भाग रहेको शंकामा बहस चर्काइएको छ ।
एमसीसीका आधिकारीक दस्तावेज, नेपाल सरकार, अमेरिकी अधिकारीहरुका भनाई तथा नेपालस्थित अमेरिकी दूताबास र राजदूतको पटक–पटकको स्पष्टीकरण बाहिर बिभिन्न शंकाका आधारमा बहस र बिरोध जारी छ । एमसीसी कुनै सैन्य रणनीति हो या होइन भन्ने बिषयले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रै बिबाद सिर्जना भएको छ ।
सरकारले एमसीसीसँग गरेको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जान्छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एमसीसीबारे दिएको पटक पटकको स्पष्टीकरण र जानकारीले पनि शंका रोकिएको छैन । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली स्वयंले नै एमसिसीविरुद्ध अनावश्यक,
अतिरञ्जित र प्रायोजित प्रचार गरिएको बताउन थालेका छन् ।नेपालमा जुन रुपमा एमसीसीबारे बहस भइरहेको छ, के वास्ताविकता त्यस्तै हो त नेपालको तीन दिने भ्रमणमा रहेका मध्य एशिया र दक्षीण एशिया हेर्ने अमेरिकी उप–सहायक विदेशमन्त्री जोनाथन हेनिकसँग हामीले यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौं ।
खबरहबका लागि सम्पादक ईश्वरदेव खनालले एमसीसीमार्फत अमेरिकाले प्रदान गर्दै आएको आर्थिक सहायता र नेपालका सन्भर्दमा भइरहेका प्रगतिबारे गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छएमसीसीबारे नेपालमा धेरैथरीका शंकाहरु देखिएका छन् यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
वास्तवमा यो यर्थाथ बाहिरको दुखःद कुरा हो । एमसीसी नितान्त आर्थिक विकासको कार्यक्रम रहेको बारे प्रष्ट हुन जरुरी छ । एमसीसी अन्तर्गत अमेरिकी सरकारले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर आर्थिक अनुदान सहायताको रुपमा उपलब्ध गराउँदै छ । यद्यपी, यो विषय कता–
कता राजनीतिक बनाइएको छ । म समस्त नेपालीजनलाई के प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने यो अनुदान सहायतामा अन्य कुनै स्वार्थ र रणनीतिक विषयसँग जोडिएको छैन । हामीले प्रदान गर्न लागेको अनुदान नेपाल र नेपाली अर्थतन्त्रको विकासको लागि उपलब्ध गराइएको हो । एमसीसीको कुनै प्रकारको रणनीति, सैन्य मामिला या अन्य शंका गर्नुपर्ने बिषयहरुसँग सरोकार छैन ।
एमसीसी र ‘इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ बीच कुनै सम्बन्ध छ कि छैन ?
म प्रष्ट पार्न चाहन्छु ‘इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ र एमसीसीबीच कुनै सरोकार छैन । एमसीसी नितान्त विकास सहायता हो । एमसीसीलाई अन्य बिषयसँग जोडेर अमेरिकाको नियतबारे शंका गर्न जरुरी छैन । अर्कोतर्फ ‘इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ भनेको विधिको शासन, खुलापन, स्वतन्त्रता र कानूनी शासन हुनुपर्छ भन्ने अमेरिकी मान्यता हो । ‘इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ कुनै सैन्य गठबन्धन, कसैलाई एक्ल्याउने रणनीतिक गठबन्धन, या निश्चित देशहरुबीचको सदस्यतामा आधारित संस्था होइन ।
खबरहबको कार्यालयमा कुराकानी गर्दै अमेरिकी उप–सहायक विदेशमन्त्री जोनाथन हेनिकयो त अमेरिकी सरकारले यस क्षेत्रका सम्बन्धमा अँगालेका मान्यताहरु र ती मान्यताहरुलाई प्रबद्र्धन गर्ने चाहनाको प्रष्फुटन मात्र हो । यी मान्यताहरु भनेका सुशासन, शान्ति र विकास हो ।
हामीले कसैलाई यस रणनीतिमा आबद्ध हुन आग्रह गरेका छैनौं । अमेरिका यस क्षेत्रका राष्ट्रहरुमा गरिने हरेक कामहरु र साझेदारितामा पारदर्शिता कायम रहोस् भन्ने मात्रै चाहन्छ । अमेरिकाले यस क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम र योजनाहरु सबै ‘इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ संग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहँदैन ।एमसीसी सहायता दिँदा अमेरिकाले नेपाललाई भारतीय चश्माले हेरेको हो कि भन्ने शंका पनि छ, के यो साँचो हो ?
नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध अन्य कुनै देशमाथि निर्भर छैन । अमेरिका र नेपालबीच ७ दशक लामो निरन्तर साझेदारिता र मित्रता छ । निश्चित रुपमा, हामीले नेपाल र यस क्षेत्रका अन्य राष्ट्रहरुसँग सामूहिक रुपमा काम गर्न इच्छुक रहेका केही क्षेत्रहरु छन् । तरपनि हाम्रो नेपालसँगको सम्बन्ध आफ्नै किसिमको छ र अन्य कुनै राष्ट्रको चश्माबाट हेर्नुपर्ने छैन ।
नेपालले यो वर्ष २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मनाइरहेको छ । यस सन्दर्भमा अमेरिकाबाट नेपाल आउने पर्यटकमा पनि बृद्धि हुन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
नेपाल अविश्वसनीय र अतुलनीय प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको तथा अनुपम संस्कृतिको नमूना हो । नेपाल अमेरिकी पर्यटकका लागि मात्र नभइ अन्य राष्ट्रहरुका नागरिकलाई समेत सहजै आकर्षक गर्न सक्ने र मन जित्न सक्ने स्थान हो ।
नेपालको प्रकृतिले सबैलाई मोहित गरिसकेको छ । मलाई लाग्छ अमेरिकाबाट नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकको संख्या अवश्य पनि बृद्धि हुनेछ । पर्यटन वर्षमा अझ बढी अमेरिकी पर्यटक भित्र्याउन, राम्रो परिस्थिति निर्माण गर्न आवश्यक सहयोगका लागि अमेरिका सधैं तत्पर छ ।